I-TorLaser - Bomvu, Luhlaza Okwesibhakabhaka, uViolet, Isikhombi se-Green Laser | I-Laser - TorLaser.com
I-TorLaser yiphrojekthi ezalwa ngonyaka we-2009 kusuka othandweni lwabalandeli abaningana lomhlaba we-laser.
Kwavela isidingo sokunikezela isiza esikhethekile izikhombisi ze-laser zamandla angempela ngentengo efinyelelekayo ukuze noma yimuphi fan abe nomkhiqizo wekhwalithi ephezulu ngentengo enhle kakhulu.
Izikhombisi ze-laser eziluhlaza manje esezisetshenziswa kakhulu, ngoba ukukhanya okuluhlaza kuze kube izikhathi eziyisithupha kukhanya esweni lomuntu kunokubomvu. I-wavelength yemikhomba eluhlaza esukela ku-6nm iya ku-500nm, i-550nm esungulwe njengeyona evamile kakhulu. Ama-lasers aluhlaza alungele noma yiluphi uhlobo lokusebenzisa: ubumnandi, ukubhula ngezinkanyezi, ukuthwebula izithombe, izivivinyo, izethulo, izibonakaliso, ukubuka okubonakalayo, ukukhwela izintaba, ukuzingela, ukufaka umoya